यौन समस्याः 'मेरो स्खलन करिब तीन मिनेटमै हुन्छ ' - NayaNepal News
Home स्वास्थ्य यौन समस्याः ‘मेरो स्खलन करिब तीन मिनेटमै हुन्छ ’
यौन समस्याः ‘मेरो स्खलन करिब तीन मिनेटमै हुन्छ ’
यौन स्वास्थ्य । म २९ वर्षीय अविवाहित पुरुष हुँ । अहिलेसम्म मेरो दुई–तीनचोटि उपवास भयो । मेरो स्खलन करिब तीन मिनेटमै हुन्छ । के भएर त्यस्तो भएको हो ? र समाधान के हुन सक्छ । –बी
उपवास भनेको दिनभर वा अहोरात्र भोजन नगर्ने अर्थात् खाना नखाने भन्ने अर्थ लाग्छ । हामीले बोलीचालीको भाषामा हामीले व्रत बस्ने भन्छौं । तपाईंले यहाँ उपवासको प्रसङ्ग किन जोड्नुभएको थाहा पाइएन । सायद तपाईले सहवास भन्न खोज्नुभएको हो कि रु सहवासको अर्थ एकसाथ बस्ने भन्ने अर्थ लाग्छ, तर सामान्य बोलीचालीको भाषामा हामीले यौनसम्पर्कका लागि पनि सहवास शब्दको प्रयोग भएको पाउँछौं ।\_उपवास भनेको दिनभर वा अहोरात्र भोजन नगर्ने अर्थात् खाना नखाने भन्ने अर्थ लाग्छ । हामीले बोलीचालीको भाषामा हामीले व्रत बस्ने भन्छौं । तपाईंले यहाँ उपवासको प्रसङ्ग किन जोड्नुभएको थाहा पाइएन । सायद तपार्इंले सहवास भन्न खोज्नुभएको हो कि ? सहवासको अर्थ एकसाथ बस्ने भन्ने अर्थ लाग्छ, तर सामान्य बोलीचालीको भाषामा हामीले यौनसम्पर्कका लागि पनि सहवास शब्दको प्रयोग भएको पाउँछौं ।
 अचेल छालाको संवेदनशीलता कम गर्ने मल्हम तथा स्प्रेहरू पनि बजारमा उपलब्ध छन्, जसले शीघ्र स्खलनलाई कम गर्न मद्दत पुग्छ । अभ्यस्त हुन निकै लामो समय लाग्ने भए पनि वीर्य स्खलन नियन्त्रणको अभ्यास पनि अर्को राम्रो उपाय हो । -साप्ताहिकबाट
Previous articleगर्भावस्थामै सिर्जना सुब्बाको फोटोसुट
Next articleहिलो र धुलो मुक्त बनाउने प्रयासमा छुः वडाअध्यक्ष, कुश ढकाल
आज ३५५३ जना कोरोना संक्रमित थपिए